Channel မိခင်ကြီး Co Co Chanel အကြောင်း လူမသိသေးတဲ့အချက်များ
3 Jul 2018 . 11:17 AM
Co Co Chanel ဆိုတာကတော့ Fashion လောကတစ်ခုလုံးရဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကျဲ နာမည်ကြီး Fashion Designer ကြီးတစ်ယောက်ပါ။ အချိန်ကာလအကန့်အသတ်မဲ့ Design တွေနဲ့ Timeless Fashion တွေကို တီထွင်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့လို့လည်း နာမည်ကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလောက်နာမည်ကြီးတဲ့ Designer ကြီးမှာလည်း လူမသိသေးတဲ့ အချက်တွေရှိနေပါသေးတယ်။ အဲ့ဒီအချက်တွေကတော့-
တစ်ကမ္ဘာလုံးက Coco Chanel လို့ သိကြတဲ့သူမရဲ့ နာမည်အရင်းက Gabrielle Chanel ပါတဲ့။ “Coco” နာမည်ကိုတော့ သူမစင်ပေါ်မှာ သီချင်းဆိုနေတုန်း အောက်ကအားပေးတဲ့ စစ်သားတွေက ပေးခဲ့တာပါတဲ့။
သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် သူမရဲ့ ငယ်ဘဝကတော့ တော်တော်ကို ကြမ်းတမ်းခဲ့တာပါ။ တောင်ယာလယ်သမားနဲ့ ပျံကျဈေးသည်တို့က မွေးခဲ့တဲ့သူမဟာ ဆင်းဆင်းရဲရဲကြီးပြင်းခဲ့ရတာပါ။
သူမအမေသေသွားပြီးနောက် မိဘမဲ့သီလရှင်ကျောင်းကို ပို့ခံခဲ့ရတဲ့ Coco ဟာ အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ်ထိ အဲ့ဒီကျောင်းမှာပဲ အပ်ချုပ်ပန်းထိုး အတတ်ပညာကို သင်ခဲ့ရတာပါ။
Coco ဟာ သူမရဲ့ ပထမဆုံး Fashion လက်ရာအဖြစ် သူမလေးစားအားကျရတဲ့သူတစ်ဦးရဲ့ အကူအညီနဲ့ ဦးထုပ်တွေစလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၁၃ မှာတော့ Paris မြို့မှာ ပထမဆုံး ဆိုင်ဖွင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်း လူသိများလာတာနဲ့အမျှ အဝတ်အစားတွေပါ ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။
၁၉၂၀ ဝန်းကျင်မှာတော့ အနက်ရောင် Dress ကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး အဲ့ဝတ်စုံဟာ လွယ်လွယ်ကူကူဝတ်ဆင်လို့ရတဲ့အပြင် လူတိုင်းတတ်နိုင်တဲ့ဈေးနဲ့ ထုတ်လုပ်ခဲ့တာမို့ တစ်ကမ္ဘာလုံးအနှံ့က Fashion ရပ်ဝန်းမှာ နာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်။
အဝတ်အစား Fashion Design အသစ်တွေ မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့အပြင် Coco ဟာ ညဘက်တွေမှာလည်း Opera စင်မြင့်တွေထက်မှာ “garcon” လို့ခေါ်တဲ့ ယောက်ျားဆန်ဆန် Fashion ဝတ်ဆင်ပြီး အမျိုးသမီးလူထုကြား ယောက်ျားဆန်ဆန် Fashion တွေ အမြင်ပွင့်စေခဲ့ပါတယ်။
အဝတ်အစားတွေပေါ်မှာသာမက ရေမွှေးထုတ်လုပ်မှုဘက်ပါ စိတ်ဝင်စားခဲ့တဲ့ Coco ဟာ ၁၉၂၁ မှာတော့ ပထမဆုံး သူမတီထွင်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ Chanel No.5 ကို စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့အချိန်ကာလမှာတော့ ပထမဆုံး Designer နာမည်နဲ့ ရေမွှေးဖြစ်ခဲ့ပြီး No.5 လို့ ပေးရခြင်းအကြောင်းကတော့ Coco ဟာ ဗေဒင်ဆရာကို မေးခဲ့တဲ့အခါ ၅ ဂဏန်းဟာသူမရဲ့ ကံကောင်းစေတဲ့ နံပါတ်ဖြစ်လို့ပါတဲ့။
Coco ရဲ့ Fashion တွေအားလုံးဟာ ခေတ်ကိုတော်လှန်ခဲ့ရုံသာမက အမျိုးသမီးတွေအားလုံး အဲ့ခေတ်အဲ့အခါက Corset ဝတ်ရတဲ့ဘဝမှ လွတ်အောင် သက်တောင့်သက်သာရှိရှိ ထုတ်လုပ်ခဲ့တာပါ။ သူမဟာ အဲ့ချိန်ခါက ပထမဆုံး စကတ်တိုလေးတွေဖန်တီးပြီး အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ ခြေသလုံးအလှကို လှစ်ဟပြစေခဲ့ပါတယ်။
၁၉၅၄ မှာတော့ Coco ဟာ စစ်အတွင်း ၁၅ နှစ်လောက်ပိတ်ခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ Fashion House ကို ပြန်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့လိုပြန်ဖွင့်ရတာကလည်း ဘာမှမလုပ်ဘဲ ရှင်သန်နေရတာ ပျင်းလွန်းလို့ပါတဲ့။
၁၉၇၁ ဇန်နဝါရီလမှာတော့ Coco ဟာ သူမရဲ့သူငယ်ချင်း Claude Baillen နဲ့ လမ်းလျှောက်ပြီးအပြန်မှာ သူမတည်းနေတဲ့ Hotel Ritz ထဲက အိပ်ရာပေါ်မှာ သေဆုံးနေခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ အိမ်ဖော်ကိုဆိုခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးစကားကတော့ တွေ့ပြီလား? ဒါမင်းတို့ ဘယ်လိုသေဆုံးရလဲဆိုတာပဲ” ဆိုတဲ့ စကားပဲဖြစ်ပါတယ်။
Channel မိခငျကွီး Co Co Chanel အကွောငျး လူမသိသေးတဲ့အခကျြမြား
Co Co Chanel ဆိုတာကတော့ Fashion လောကတဈခုလုံးရဲ့ ဒိတျဒိတျကြဲ နာမညျကွီး Fashion Designer ကွီးတဈယောကျပါ။ အခြိနျကာလအကနျ့အသတျမဲ့ Design တှနေဲ့ Timeless Fashion တှကေို တီထှငျဖနျတီးနိုငျခဲ့လို့လညျး နာမညျကွီးတာဖွဈပါတယျ။ ဒီလောကျနာမညျကွီးတဲ့ Designer ကွီးမှာလညျး လူမသိသေးတဲ့ အခကျြတှရှေိနပေါသေးတယျ။ အဲ့ဒီအခကျြတှကေတော့-
တဈကမ်ဘာလုံးက Coco Chanel လို့ သိကွတဲ့သူမရဲ့ နာမညျအရငျးက Gabrielle Chanel ပါတဲ့။ “Coco” နာမညျကိုတော့ သူမစငျပျေါမှာ သီခငျြးဆိုနတေုနျး အောကျကအားပေးတဲ့ စဈသားတှကေ ပေးခဲ့တာပါတဲ့။
သနျးကွှယျသူဌေးဖွဈခဲ့ပမေယျ့ သူမရဲ့ ငယျဘဝကတော့ တျောတျောကို ကွမျးတမျးခဲ့တာပါ။ တောငျယာလယျသမားနဲ့ ပြံကဈြေးသညျတို့က မှေးခဲ့တဲ့သူမဟာ ဆငျးဆငျးရဲရဲကွီးပွငျးခဲ့ရတာပါ။
သူမအမသေသှေားပွီးနောကျ မိဘမဲ့သီလရှငျကြောငျးကို ပို့ခံခဲ့ရတဲ့ Coco ဟာ အသကျ ၁၈ နှဈအရှယျထိ အဲ့ဒီကြောငျးမှာပဲ အပျခြုပျပနျးထိုး အတတျပညာကို သငျခဲ့ရတာပါ။
Coco ဟာ သူမရဲ့ ပထမဆုံး Fashion လကျရာအဖွဈ သူမလေးစားအားကရြတဲ့သူတဈဦးရဲ့ အကူအညီနဲ့ ဦးထုပျတှစေလုပျခဲ့ပါတယျ။ ၁၉၁၃ မှာတော့ Paris မွို့မှာ ပထမဆုံး ဆိုငျဖှငျ့နိုငျခဲ့ပါတယျ။ တဖွညျးဖွညျး လူသိမြားလာတာနဲ့အမြှ အဝတျအစားတှပေါ ရောငျးခခြဲ့ပါတယျ။
၁၉၂၀ ဝနျးကငျြမှာတော့ အနကျရောငျ Dress ကို စတငျမိတျဆကျခဲ့ပွီး အဲ့ဝတျစုံဟာ လှယျလှယျကူကူဝတျဆငျလို့ရတဲ့အပွငျ လူတိုငျးတတျနိုငျတဲ့ဈေးနဲ့ ထုတျလုပျခဲ့တာမို့ တဈကမ်ဘာလုံးအနှံ့က Fashion ရပျဝနျးမှာ နာမညျကွီးခဲ့ပါတယျ။
အဝတျအစား Fashion Design အသဈတှေ မိတျဆကျခဲ့တဲ့အပွငျ Coco ဟာ ညဘကျတှမှောလညျး Opera စငျမွငျ့တှထေကျမှာ “garcon” လို့ချေါတဲ့ ယောကျြားဆနျဆနျ Fashion ဝတျဆငျပွီး အမြိုးသမီးလူထုကွား ယောကျြားဆနျဆနျ Fashion တှေ အမွငျပှငျ့စခေဲ့ပါတယျ။
အဝတျအစားတှပေျေါမှာသာမက ရမှေေးထုတျလုပျမှုဘကျပါ စိတျဝငျစားခဲ့တဲ့ Coco ဟာ ၁၉၂၁ မှာတော့ ပထမဆုံး သူမတီထှငျဖနျတီးခဲ့တဲ့ Chanel No.5 ကို စတငျထုတျလုပျခဲ့ပါတယျ။ အဲ့အခြိနျကာလမှာတော့ ပထမဆုံး Designer နာမညျနဲ့ ရမှေေးဖွဈခဲ့ပွီး No.5 လို့ ပေးရခွငျးအကွောငျးကတော့ Coco ဟာ ဗဒေငျဆရာကို မေးခဲ့တဲ့အခါ ၅ ဂဏနျးဟာသူမရဲ့ ကံကောငျးစတေဲ့ နံပါတျဖွဈလို့ပါတဲ့။
Coco ရဲ့ Fashion တှအေားလုံးဟာ ခတျေကိုတျောလှနျခဲ့ရုံသာမက အမြိုးသမီးတှအေားလုံး အဲ့ခတျေအဲ့အခါက Corset ဝတျရတဲ့ဘဝမှ လှတျအောငျ သကျတောငျ့သကျသာရှိရှိ ထုတျလုပျခဲ့တာပါ။ သူမဟာ အဲ့ခြိနျခါက ပထမဆုံး စကတျတိုလေးတှဖေနျတီးပွီး အမြိုးသမီးတို့ရဲ့ ခွသေလုံးအလှကို လှဈဟပွစခေဲ့ပါတယျ။
၁၉၅၄ မှာတော့ Coco ဟာ စဈအတှငျး ၁၅ နှဈလောကျပိတျခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ Fashion House ကို ပွနျဖှငျ့ခဲ့ပါတယျ။ အဲ့လိုပွနျဖှငျ့ရတာကလညျး ဘာမှမလုပျဘဲ ရှငျသနျနရေတာ ပငျြးလှနျးလို့ပါတဲ့။
၁၉၇၁ ဇနျနဝါရီလမှာတော့ Coco ဟာ သူမရဲ့သူငယျခငျြး Claude Baillen နဲ့ လမျးလြှောကျပွီးအပွနျမှာ သူမတညျးနတေဲ့ Hotel Ritz ထဲက အိပျရာပျေါမှာ သဆေုံးနခေဲ့ပါတယျ။ သူမရဲ့ အိမျဖျောကိုဆိုခဲ့တဲ့ နောကျဆုံးစကားကတော့ တှပွေီ့လား? ဒါမငျးတို့ ဘယျလိုသဆေုံးရလဲဆိုတာပဲ” ဆိုတဲ့ စကားပဲဖွဈပါတယျ။